Umfanekiso wokuqala ovela kwi-movie Killers of the Flower Moon nguMartin Scorsese | Ndisuka mac
Iprojekthi elandelayo kaMartin Scorsese, Ukubulala kweNyanga yeentyatyambo, iya kwenziwa kuqala kwi-Apple TV + kuphela, emva kokuba inkampani esekwe eCupertino ibambe isivumelwano kunye nemveliso yenkampani yaseScorsese kunye nekaLeonardo DiCaprio. Nje ukuba i-cast igqityiwe kwaye iindima zinikezelwe kwakhona, Ukufayilisha kuqalile kwaye sele sinomfanekiso wokuqala.
Emva konyaka wokulungiselela, iindaba zokuqala malunga nale bhanyabhanya zivela nge-Matshi 2020, ekugqibeleni sinazo umfanekiso wokuqala wale bhanyabhanya intsha yeScorsese, umfanekiso obonisa uLeonardo DiCaprio njengoErnest Burkhart noLily Gladstone njengomfazi wakhe, uMollie.
#BabulaliBoFlowerMoon @OsageNews https://t.co/L9gY0cmR7x pic.twitter.com/Mpmo7jB64l
-Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) Ngamana 10, 2021
Lo mfanekiso wabelwe nguDiCaprio ngeakhawunti yakhe ye-Twitter (Via Iindaba zokuSebenzisa). ILilystone yelitye wajoyina ifilimu ngoFebruwari odlulileyo, kunye UJese Plemons njengearhente yeFBI Uya kwenza uphando yokubulawa kwabantu abazizityebi bamaIndiya aseOsage.
Le vidiyo, ukongeza kumlawuli, iScorsese ikwangumvelisi olawulayo, yiyo esekwe kwincwadi eponymous ngumbhali uDavid Grann. Ukongeza kuLeonardo DiCaprio, enye yeenkwenkwezi ezinkulu zaseHollywood ezibonakala kule filimu intsha nguRobert DeNiro.
Ukubulala kweNyanga yeentyatyambo isethwe ngo-1920, kwaye i-Federal Bureau yoPhando (FBI) esandula ukwenziwa ukuphanda ukubulawa kwezityebi zamaIndiya aseOsage abo banikwe amalungelo erenti kwioyile efunyenwe phantsi kwamazwe abo.
Kusekutsha kakhulu ukuba ungazi ingaba ngowuphi umhla wokukhutshwa kwale bhanyabhanya intshaNangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba ifikelele kwi-cinema nakwi-Apple TV + ngaphambi kokuphela konyaka ukuze bakhuphisane kwii-Oscars zeAkhademi yaseHollywood kulo nyaka uzayo, kuyakuba lupapasho lwama-94.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Umfanekiso wokuqala ovela kuMartin Scorsese Ababulali beMovie yeNyanga yeMovie